सम्झनाका तरेलीमा ती सुन्दर अनुहार (सन्दर्भ : २१ औँ प्रतिरोध सांस्कृतिक दिवस) – eratokhabar
राजुलेखकका सबै लेख-रचना हेर्नुस्
ई-रातो खबर २०७५, ५ चैत मंगलबार १३:३१ March 19, 2019 257 Views
बहिनी । मेरो आँखाको साउने झरी हेर्न आऊ, मेरो छातीभित्र दन्केको आगो हेर्न आऊ । आऊ, बहिनी आऊ, मलाई हेर्न आऊ । चौध वर्षीया मञ्जु कुँवरको कलिलो मुहार स्मृतिमा धमिलो भएर प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । मञ्जुको घरमा धेरैचोटि गएको छु म, दर्जनौँपटक घरको आँगन कुल्चिएर ओहोरदोहोर गरेको छु तैपनि किशोरी मञ्जुको तस्बिर प्रस्ट भइरहेको छैन । सुभद्रा सापकोटा, चिनीमाया लामा, डम्बर श्रेष्ठ र गुम्बासिंह लामालाई व्यक्तिगत रूपमा म चिन्दिनँ । यसको मतलब ती आदरणीय नामहरूप्रति, ती राता यात्रीहरूप्रति, ती झर्झराउँदा जीवनहरूप्रति मेरो श्रद्धा छैन भन्ने हैन । ती आदरणीय नामहरूप्रति, यात्रीहरूप्रति, ती झर्झराउँदा जीवनहरूप्रति मेरो असीम श्रद्धा छ, लाखौँ रातो सलाम छ । यतिखेर हामी हाँस्दाहाँस्दै रोएका छौँ र रुँदारुँदै हाँसेका छौँ । आफन्तजनहरूको र वर्गीयजनहरूको बीभत्स मृत्युले हामी हतप्रभ भएका छौँ । सुखद भविष्यको कल्पना हामीले मस्तिष्कमा सजाएका पनि छौँ । काभ्रेको इतिहासमा मात्रै हैन, सिङ्गो नेपालको इतिहासमा नयाँ र अत्यन्तै दुःखद् घटनाका रूपमा चैत ५ को अनेकोटको हत्याकाण्ड नेपाली इतिहासमा जीवित रहनेछ । जब सरकार जनताबाट एक्लिन्छ, निरङ्कुश, फासिस्ट र आततायी सत्ता रङदेखि डराउँछ, सारङ्गी र बाँसुरीदेखि डराउँछ, मादल र हार्मोनियमदेखि डराउँछ, डराउँदाडराउँदा ऊ हाम्रो हातदेखि डराउँछ, हाम्रो आवाजदेखि डराउँछ । अन्ततः ऊ आज सुत्केरी आमादेखि डराएको छ । कोक्रामा मुस्कुराइरहेका अबोध नानीहरूको निश्छल मुस्कानदेखि डराएको छ । यो आततायी सरकारलाई आजकाल डराउने रोग लागेको छ । त्यसैले जताततै मृत्यु रोप्दै हिँडेको छ । आततायीहरूलाई के थाहा, चिहानबाट अजस्र जीवनहरू पलाउँदै गएको कुरा ! हिजो रुकुममा मस्त ढले, सिन्धुलीमा जयाहरू ढले, काभ्रेमा कान्छा लामाहरू ढले तर के ती राता मान्छेहरूले गाउने गीत उनीहरूसँगै चिहानमा पुरिए त ? पुरिएनन् । अझ ती राता गीतहरू झन् सिम्रिक बन्दै, लालुपाते र लालीगुराँस बन्दै गाउँबस्तीमा पैmलिए । चौध वर्षीया किशोरी मञ्जुले समेत बस्तीमा ढलेका आफन्तहरूको जीवन खोज्दै गीत गाए । चिहानको पहाडमाथि रोइरहेका गाउँहरू खोज्दै सङ्गीत सुनाए । पर्खालभित्र जन्जिरले कसिएका आफन्तहरूका हातहरू माग्दै आफ्ना कलिला हातहरू आततायीहरूले टुक्राटुक्रा पारेर छप्काएका छन् । कलकलाउँदा जीवनहरूलाई जिउँदै डढाएका छन् तर किशोरी मञ्जुका कलिला एकजोर हात लाखौँ हात बनेर उठिसकेका छन् । ती जिउँदै पोलिएका कलकलाउँदा जीवनहरू लाखौँ जीवन बनेर यात्रामा जुटिसकेका छन् । आततायीहरूको इतिहास भनेको हत्या, बलात्कार र लुटपाटको इतिहास हो । अमेरिकी आततायीहरूले जनताका प्यारा गायक पल रब्सनलाई, जनताका प्यारा लेखक अबु जमाललाई चपाउन खोजेको इतिहास हाम्रासामु ताजै छ । तसलिमा नसरिन र सलमान रुस्दीले आजसम्म भोगिरहेको नियतिबाट हामी अपरिचित छैनौँ । फासिस्ट राणाहरूले सुब्बा कृष्णलाललाई जेलभित्र नै कुहाएको इतिहास पनि हाम्रासामु चिसिएको छैन । आततायीहरूले इतिहासलाई अझ कठोर र अझ तीव्र बनाएका छन् । बनाओ आततायीहरू, जतिसक्दो कठोर बनाओ । जतिसक्दो तीव्र बनाओ तर हामी हाम्रो गीत गाइरहनेछौँ, हाम्रो सङ्गीत बजाइरहनेछौँ, हामी हाम्रो यात्रामा अघि बढिरहनेछौँ, निरन्तर…निरन्तर… । (रातो युद्धले जन्माएका राता सहिदहरू, पहिलो संस्करण २०६० बाट)